ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ | Page9| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 43
9.8.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
3.8.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 43 တွင်
1. ရေခဏခဏချိုးတာ ကောင်းရဲ့လား (Page – 5)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 42
5.8.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
27.7.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 42 တွင်
1. အိပ်စက်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင် (Page – 5)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 41
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 40
13.7.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 40 တွင်
1. အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ (Page – 11)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 39
29.6.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 39 တွင်
1. အလုပ်ချိန်ကြာတော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာမျ...
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 38
29.6.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 38 တွင်
1. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာစေဖို့ (Page – 11)...
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 37
22.6.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 37 တွင်
1. လည်ပင်းနာနေလို့ပါ (Page – 5)
2. ရောဂါပိုးတို့၏ ဂေဟစနစ် (Pa...
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 36
13.6.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 36 တွင်
1. နေ့လယ်စာလေး ချက်စားကြရအောင် (Page – 5)